भुटानमा सत्ता कब्जाको प्रयास ! बरिष्ठ न्यायाधीश र सैनिक अधिकारी नियन्त्रणमा — Imandarmedia.com
भुटानमा सत्ता कब्जाको प्रयास ! बरिष्ठ न्यायाधीश र सैनिक अधिकारी नियन्त्रणमा
एजेन्सी। भुटानमा सर्वोच्च अदालतका एक बरिष्ठ न्यायाधीश, एक शीर्ष सैनिक अधिकारी र एक जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई हिरासतमा लिइएको छ । उनीहरुमाथि भुटानका प्रधानन्यायाधीश, सेना प्रमुख र शीर्ष कानुन अधिकारीलाई अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्र रचेको आरोप छ । अब यस विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ र हिरासतमा लिइएका व्यक्तिहरुसँग सोधपुछ चलिरहेको छ ।
भुटानको सरकारी अखबार कुएन्सेलका अनुसार भुटान पुलिसले बुधबार सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश कुएन्ले छिरिङ र पेमागात्सेल जोंगखाग प्रशासनिक इकाइका ड्रांगपोन येसे दोर्जीलाई हिरासतमा लिएको हो । यो कारवाही पूर्व रोयल बडीगार्ड कमाण्डेन्ट थिन्ले तोबगीलाई हिरासतमा लिएपछि गरिएको छ ।
रिपोर्टअनुसार यी तीनै जनालाई अदालतमा पेश गरिएको छ । अदालतले तीनै जनालाई जमानतमा छाड्न अस्वीकार गरेको समाचारमा जनाइएको छ । केही समयअघि खान्दु वाङमो नामकी यी महिलालाई पक्राउ गरिएको थियो । यी महिलाले षड्यन्त्रबारे कैयौं खुलासा गरेकी थिइन् । यी महिलाका अनुसार रोयल बडीगार्डका प्रमुख, सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका अटर्नी जनरल वा रजिस्ट्रार जनरललाई अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको थियो ।
यो पनि: प्रधानमन्त्री इमरान खानको ठूलो काण्ड बाहिरियो, मोदी खुसीले गदगद
पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खान अहिले विवादमा तानिएका छन् । उनको ठूलो काण्ड बाहिरिएको छ । आफ्नो सरकारको प्रचार गर्नका लागि सार्वजनिक गरिएका पोस्टर र ब्यानरमा भारतीय जनताको फोटो समावेश गरेको आरोप विपक्षीहरुले उनीमाथि लगाएका हुन् ।
मिडिया रिपोर्टहरुका अनुसार विपक्षीहरुको टिप्पणीपछि भारत खुसीको खबर छ । पाकिस्तानमा इमरान खान प्रधानमन्त्री चुनिएको तीन वर्ष पुगेको छ । यस अवसरमा उनले आफ्ना उपलब्धिबारे जनतालाई जानकारी दिन र आफ्नो पार्टी पिटिआईको प्रचार गर्नका लागि पोस्टर, ब्यानर र पर्चा छपाउन लगाएका थिए । आगामी चुनावको तयारीलाई समेत मध्यनजर गरेर यस्तो गरिएको थियो ।
बुधबार विशेष कार्यक्रम आयोजना गर्दै प्रधानमन्त्री इमरान खान आफैंले पोस्टर र ब्यानर सार्वजनिक गरे । अहिले यी ब्यानर र पोस्टरले उनलाई विवादमा तानेको छ । यस पोस्टरमा भारतीय जनताका तस्बिरहरु दुरुपयोग गरिएको आरोप पाकिस्तान मुस्लिम लिगकी सांसद् र पूर्वमन्त्री मरियम औरंगजेबले लगाएकी छिन् ।
ट्वीटमार्फत मरियमले यस्तो आरोप लगाएकी हुन् । उनका अनुसार इमेजबजार डटकम नामक भारतीय वेबसाइटबाट यी तस्विर तानिएका हुन् । ‘देशमा बेरोजगारी र महँगी यति धेरै बढेको छ कि सरकारलाई झुठ बोल्नका लागि भारतका तस्विरहरुको सहारा लिनु परिरहेको छ । अब त प्रमाण बाहिर आइसकेको छ ।
पाकिस्तानको खुसीको तस्बिर सरकारले कसरी ल्याओस् ? यदी यो सरकारले केही काम गरेको हुन्थ्यों भने भारतीयको तस्बिरको प्रयोग किन गरिन्थ्यों ? यो चोरको सरकार हो, जसले चोरेर काम चलाइरहेको छ,’ मरियमले लेखेकी छिन् ।
पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पिटिआई) का प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारीले पनि खानको ठूलो आलोचना गरेका छन् । ‘यो सरकारको वास्तविकता यस्तो छ । इमरान खानले देशलाई बर्बाद गरेका छन् । उनी आफैंलाई पनि यो थाहा छ, तर कुर्सी छाड्न जान्दैनन्,’ भुट्टोले लेखेका छन् ।
यो पनि : अमेरिकी प्रतिनिधि सभामा शीर्ष रिपब्लिकन नेताले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको कडा निन्दा गरेका छन् । अफगानिस्तानको काबुल विमानस्थलको बाहिर भएको विस्फोटमा १३ जना अमेरिकी सैनिक मारिएपछि रिपब्लिकन नेता केभिव म्याकार्थीले डेमोक्रेटिक सभामुख न्यान्सी पेलोसीसँग सल्लाह नगरी सदनका सदस्यहरुलाई अगस्टको विदाकै बीचमा कानुन बनाउने विषयमा बिचार गर्न भनेका छन् ।
उनले कानुन बनाएपछि अफगानिस्तानबाट सबै अमेरिकी नागरिकको उद्धार नभएसम्म अफगानिस्तानमै बस्नुपर्ने बताएका छन् । उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यो त्यो नेतृत्व होइन, जुन राष्ट्रपतिले प्रतिवद्धता गरेका थिए । यो कमजोरी र अयोग्यताको तस्वीर हो । कमान्डर इन चिफ भएको हैसियतले अमेरिकी जनतामा विश्वास, आस्था र साहस चाहिन्छ, यी सबै राष्ट्रपति बाइडेनले गुमाएका छन् ।’
अफगानिस्तानमा १३ जना अमेरिकी सैनिक मारिएपछि म्याकार्थीले यो कुरा भनेका हुन् । उता बाइडेनले ३१ अगस्टसम्म अमेरिका र उसका सहयोगी सैनिक अफगानिस्तानबाट पूर्णरुपमा बाहिरिने बताइसकेका छन् ।
सभामुख पेलोसीको सचिवलायले म्याकार्थीको निवेदनमा टिप्पणी गर्न अस्वीकार गरेको छ । तर आइतबारका एक शीर्ष सहयोगीले ट्वीट गर्दै भनेका थिए, ‘अल्मतका नेताहरु मिसन जारी राख्न चाहन्छन् र कमान्डर इन चिफको अधिकार अभियानको निकै जोखिमपूर्ण समयमा कटौति गर्न चाहन्छन् ।’
बाइडेनभन्दा पहिला रिपब्लिकन राष्ट्रपति रहेका डोनाल्ड ट्रम्पले तालिबानसँग अमेरिकी सेनाहरुको अफगानिस्तानबाट फिर्तीबारे कुरा गरेका थिए । बाइडेनको राजीनामा, महाअभियोग र अन्य मागबारे कैयौं कन्जरभेटिभ नेताहरुले नजरअन्दाज गरेका छन् । राजीनामाको मागबारे म्याकार्थीलाई सोधिएको प्रश्नमा उनले नजरअन्दाज गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘एक दिन हिसाब किताब हुनेछ । जुन दिन हामी सबैलाई अफगानिस्ताबाट बाहिर ल्याउने छौं त्यसपछि हामी प्रश्न र उत्तर गर्नेछौं । यी गल्तिहरुका लागि को ठिक ठिक जिम्मेदार छन् ।’
२० वर्ष लामो अफगानिस्तान मिसन समाप्त पार्दै अमेरिकी सेना यही अगस्टमा पूर्ण रुपमा काबुल छाड्दै छ । अमेरिकी सेना अफगानिस्तानबाट फर्किन सुरु गरेको केही हप्तामै इस्लामिक कट्टरपन्थी तालिबानले काबुललाई नियन्त्रणमा लिएपछि अफगानिस्तानमा उथलपुथल भएको छ ।
यहीबीचमा काबुलस्थित विदेशी दूतावासहरु बन्द भएका छन् । विदेशी नागरिक र अफगानीहरु देश छाडेर हिँडिरहेका बेला गत विहीबार काबुल विमानस्थलको भिडभाड भएको स्थानमा दुई वटा आत्मघाति बम विस्फोट भएका थिए । आईएसके ले जिम्मेवारी लिएको सो आक्रमणमा १३ जना अमेरिकी सैनिकसहित कम्तिमा १७० जना मारिएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरुले जनाएका छन् ।
अफगानिस्तानबाट अमेरिका फर्किन थालेपछि राष्ट्रपति बाइडेनको आलोचना सुरु भएको थियो । काबुल आक्रमणपछि उनको आलोचना झन बढेको छ ।